တစ်ခု အဓိပ္ပါယ် : သံကြိုးလျှော သည် အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသည့် လက်စွဲကြိုးဆွဲစက် အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး "ကွင်းဆက်ပိတ်ဆို့ခြင်း" သို့မဟုတ် "ပြောင်းပြန်ကွင်းဆက်" ဟုလည်း ခေါ်သည်။နှစ်ခု : အတိုင်းအတာ နှင့် အသုံးပြုနည်း : ၎င်းသည် သေးငယ်သော စက်ကိရိယာများနှင့် ကုန်ပစ္စည်းများကို အကွာအဝေး လွှင့်တင်ခြင်း၊ ရုတ်သိမ်းခြင်းအတွက် သင့်လျော်သည်။
webbing sling အား အလွှာတစ်ခုတည်း၊ နှစ်လွှာနှင့် အလွှာလေးခုအဖြစ် ခွဲခြားနိုင်ပြီး ချုပ်နည်းအမျိုးမျိုးရှိသည်။ polyester flat webbing sling အရွယ်အစားကို အသုံးပြုသူ၏လိုအပ်ချက်အရ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည် (1-50 တန်ဝန်၊ အရှည် 1-100 မီတာ) နှင့် bearing မျက်နှာပြင်သည် wi...
ပထမဦးစွာ၊ ဤ jack နှစ်မျိုးသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အသုံးများသော jacks များဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ application များသည် အလွန်ကျယ်ပြန့်ပါသည်။ကွာခြားချက်ကဘာလဲ။အတိုချုံးရှင်းပြကြပါစို့- လေးလံမှုကို မြှောက်ရန် သို့မဟုတ် လျှော့ချရန်အတွက် ဝက်အူနှင့် nut ၏ နှိုင်းရရွေ့လျားမှုကို အသုံးပြုသည့် ဝက်အူပုလင်းအပေါက်အကြောင်း ဦးစွာပြောဆိုကြပါစို့။
ratchet ချည်နှောင်ခြင်း နိဒါန်းတစ်ခု- ratchet ချည်နှောင်ခြင်း၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် Ratchet tie down သည် ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှု၊ ရွေ့လျားမှု၊ ပို့ဆောင်မှု သို့မဟုတ် သိုလှောင်မှုအတွင်း အသုံးပြုသည့် ပုံသေလုပ်ဆောင်ချက်များဖြစ်သည်။၎င်းတို့သည် ဘေးကင်းပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ ပေါ့ပါးပြီး လည်ပတ်ရလွယ်ကူပြီး သော့ခတ်ထားသည့်အခါ အရာဝတ္ထုများ ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။နှစ်ခု: ကျော်...
1. လက်မောင်းလီဗာ သံကြိုးလွှင့်ထူသည် လွှင့်ထူထားသောဝိုက်နှင့် ပုံသေအရာဝတ္တုကို လုံခြုံစွာပြင်ဆင်ပြီး သံကြိုးချိတ်နှင့် ဆိုင်းငံ့ထားသောလေးလံသောအရာတို့ကို စိတ်ချယုံကြည်စွာ တွဲဆွဲထားသည်။2. လီဗာ လွှင့်ထူသည် လေးလံသောအရာများကို လွှင့်တင်သည်။ရာထူးကတ်၏ "အပေါ်သို့" ခလုတ်ကို လှည့်ပါ၊ ထို့နောက် လက်ကိုင်ဘက်သို့ လှည့်ပါ...
1. မြှင့်မရနိုင်သော ကြမ်းပြင်ပေါက်ကို မည်သို့ပြုပြင်မည်နည်း။မြှင့်၍မရသော အလျားလိုက်အပေါက်အတွက် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းလမ်းသုံးမျိုး ရှိပါသည်။ တစ်ခုမှာ ဆီထွက်ပေါက်အဆို့ရှင် လုံးဝပိတ်သွားခြင်း ရှိ၊မရှိ စစ်ဆေးရန်၊နောက်တစ်ခုကတော့ ဆီမြောင်းလက်ကိုင်ကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ချုပ်ပြီး ဖြေလျော့ဖို့ပါပဲ..။
ZHIXING စက်ယန္တရားသည် Chain hoist၊ lever hoist. ၏ ကျွမ်းကျင်သော ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး chain hoist ၏ R&D ကို 15 နှစ်ကျော် အာရုံစိုက်ထားသည်။
ထုတ်ကုန်စွမ်းဆောင်ရည်အရ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အောက်ပါစမ်းသပ်မှုများကို ပြုလုပ်ပါမည်- ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်ထွင်းစမ်းသပ်မှု (၄) ကြိမ်၊ ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီအတွက် (၁.၅) ကြိမ် ဝန်စမ်းသပ်မှုကို ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။ လီဗာဘလောက်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် နောက်ထပ် 2% light loading test ပြုလုပ်ရပါမည်။မစုမစည်းခင်မှာ ဆွဲကြိုးကို ၂ ခါလုပ်ရမယ်..။
admin မှ 22-02-12 ရက်နေ့တွင်
Hand lever hoist သည် အသုံးပြုရ ရိုးရှင်းပြီး သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော manual lifting tool တစ်ခုဖြစ်သည်။မောင်းတံအား ရုတ်သိမ်းခြင်း၊ ဆွဲခြင်း၊ နှိမ့်ချခြင်း၊ ချိန်ညှိခြင်းနှင့် အခြားလုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ရုတ်သိမ်းသောအလေးချိန်သည် ယေဘူယျအားဖြင့် 50T ထက်မပိုပါ။သင်္ဘောတည်ဆောက်ရေး၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ သတ္တုတူးဖော်ရေးတွေမှာ တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြပါတယ်။
လျှပ်စစ်ဝါယာကြိုး လွှင့်ထူခြင်းအတွက် ဘေးကင်းရေး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု စည်းမျဉ်းများ
admin မှ 22-01-21 ရက်နေ့တွင်
1. အော်ပရေတာများအားလုံးသည် အလုပ်အကြိုသင်တန်းကို ပြီးမြောက်ပြီး ရာထူးမတက်မီ အလုပ်အကြိုသင်တန်းကို ဖြေဆိုရပါမည်။2. သေးငယ်သောလျှပ်စစ်ဓာတ်လှေကားအား အထူးလူတစ်ဦးမှ လည်ပတ်သင့်သည်။3. မရုတ်သိမ်းမီ စက်များ၊ ဝါယာကြိုးများနှင့် ချိတ်များ ခိုင်မာမှုရှိမရှိ စက်ပစ္စည်းများ၏ ဘေးကင်းရေး စွမ်းဆောင်ရည်ကို စစ်ဆေးပါ...
Aluminum Alloy Lever Hoist ကို ဘယ်လိုခွဲခြားသိနိုင်မလဲ။
အောက်ပါအချက်များကို ကိုးကားနိုင်သည်- 1) Visual inspection: A. calabash ၏ အစိတ်အပိုင်းများအားလုံးသည် အသွင်အပြင် အရည်အသွေးကို ထိခိုက်စေသော အမာရွတ်များ၊ burrs များနှင့် အခြားသော ချို့ယွင်းချက်များ မရှိဘဲ B. လီဗာ လွှင့်ထူထားသော ကွင်းဆက်များ၏ အခြေအနေ၊အောက်ပါတို့ကို ဖယ်ရှားပစ်ရပါမည်- (၁) သံချေးတက်ခြင်း...
admin မှ 22-01-13 ရက်နေ့တွင်
လက်ရှိအခြေအနေတွင်၊ ကြိုးဆွဲကြိုးများကို လူနေမှုဘဝနှင့် ထုတ်လုပ်မှုနယ်ပယ်အသီးသီးတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုခဲ့ကြပြီး စီးပွားရေးတည်ဆောက်မှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ထူးထူးခြားခြား ပံ့ပိုးကူညီမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။သံကြိုးလွှင့်စက်သည် သုံးစွဲသူများ၏ အာရုံစိုက်မှုကို တဖြည်းဖြည်း ဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။ကဲ ASAKA Manual ဆိုင်ခွဲ Hoi...
HHBB Electric Chain Hoist ၏ အားသာချက်
HHBB လျှပ်စစ်ကွင်းဆက် hoist သည် လျှပ်စစ်မော်တာ၊ ဂီယာယန္တရားနှင့် sprocket တို့ပါ၀င်သော ပေါ့ပါးပြီး သေးငယ်သော lifting ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။lifting weight သည် 0.5T-50T ဖြစ်ပြီး lifting height သည်3မီတာနှင့် အထက်ဖြစ်သည်။ဂျပန်လျှပ်စစ်ကွင်းဆက် လျှပ်စီးကြောင်း အသုံးချမှု နယ်ပယ် တွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည် ။